Luxury Car Coach Rentals Odisha | Mazana emotokari yakashambadzirwa
Kukodzwa kwemotokari kune chikomborero chezuva sezvatinogona kuzvishandisa nenzira yakawanda uye kusununguka kufamba sezvinoita motokari dzedu. Zororo & zororo ndeye basa rinokosha kune avo vanoda kudzidza nekufambira mberi kunze kwekugara vakagwinya. Kurwendo ndiyo yakanakisisa yekudzidza munguva yekuzorora; kunyanya kuvana vedu vaduku, asi zvingadai zvisina kumbove zviri nyore munzvimbo yeAdisha, kana Car Coach Rentals Odisha ingadai isina kunge iripo.
Nzvimbo yeSepet Pebbles Tours ndiyo sangano rekufambisa kupa vashandi vemotokari yemotokari ku Odisha. Isu tinoita kuti yese yekufambisa maitiro inotarisirwa nekutarisirwa kwakanyanya uye kukanganisa. Zvakaitika kwauri nesu zvinogara zvichiita kuti unzwe uchida zvimwe zvatinopa huni-ye-in-art motokari uye vashandi vanoshanyira Odisha. Isu tine motokari huru yemotokari paunoshumira kuti uite nharaunda yakasimba uye yakaoma munharaunda yeOudisha. Motokari dzedu dzakanyatsogadzirirwa nezvose zvinodiwa zvinoita kuti ugare wakasununguka nguva dzose muzendo. Iwe haufaniri kunetseka kana iwe uri woga kana neboka revamwe shamwari, pasinei neboka guru kana boka duku, uye chero zvingave zviripo tine nzira yakakodzera yakakwana iyo inogona kukodzera zvose zviri zviviri muhomwe yako uye kutora.
Car Coach Rentals Odisha inotsanangurwa pasi apa: -
Fleet yeC AC Yakashambadzirwa Cars uye Coaches
Magari: Mercedes Benz, BMW, Fortuner, Corolla Altis, Honda City, Honda BRV uye zvakafanana.
Coaches: 13, 19, 27, 41 & 45 vanogara zvigadzirwa zvepamusoro.
Motokari iri pasi pemakore matatu uye ine kuchengeteka michina / Mabhanhire, Makira ekutanga-kubatsira, Mineral Water, nezvimwe zvinhu zvinokosha.
Zvirongwa zviri pa 24 Hrs / 7 mazuva pavhiki
Chauffeurs vakadzidza, vane ruzivo uye vane mafoni ekubatanidza.
Sandwende Pebbles ndiyo Inotakura Transport Operator yeNyika uye Multi-National houses dzimba.